UXiaomi akazukumilisela iMi Max okanye iMi Qaphela iimodeli kulo nyaka | I-Androidsis
UXiaomi akazukumilisela nayiphi na iMi Max okanye iMi Qaphela kulo nyaka
IXiaomi yenye yeempawu kwi-Android ezinekhathalogu ebanzi yeefowuni. Kungekudala usapho lwakho lweefowuni luya kukhula ngakumbi, enkosi kuluhlu lweCC osele uyenzile. Nangona kungenxa yoluhlu olutsha olwenziweyo, uphawu lwaseTshayina lushiya bucala ezinye iintsapho zeefowuni, njengoko bezazisile ngokusemthethweni.
Kule meko ziiMi Qaphela kunye neMi Max. UXiaomi uqinisekisile ukuba kulo nyaka akuyi kubakho fowuni zisuka kuwo omabini la mabakala. Isigqibo abaninzi abasigqibanga ukukholisa, nangona banezizathu zabo.
Uphawu lwaseTshayina selusungule iifowuni ezimbalwa ukuza kuthi ga ngoku kulo nyaka, ukongeza ekudaleni uluhlu olutsha kunye nokumiliselwa kweRedmi njengophawu. Ngesi sizathu, iXiaomi iphakathi ekuhlelweni kwakhona kwesicwangciso sayo, oko kuthetha ukuba eminye imigca ayizukuvuselelwa, njengoko kwenzekile ngeMi Max neMi Qaphela.
Sisigqibo esichaphazela lo nyaka, nangona singazi nokuba ngokuhamba kwexesha kuyakubonwa njengesigqibo sokugqibela. Ngokukodwa uluhlu lweMi Max lolunye olunengxaki ngoku. Olu luhlu lwaludume ngokubonisa iifowuni ezinkulu, kodwa kuthathelwa ingqalelo ukuba izikrini zanamhlanje zinkulu kakhulu, ayenzi ngqondo kakhulu ukuba nolu luhlu.
Ke ngoko, kunokwenzeka ukuba emva kwethutyana uXiaomi enze isigqibo sokushiya la mabakala mabini ngokusisigxina. Nangona okwangoku kungekho nto injalo yenzekileyo kwaye evela kwinkampani bayagxininisa ukuba okwangoku esi sigqibo sichaphazela kuphela i-2019. I-brand ifuna ukugxila kwiimodeli zokugqibela eziphezulu kunye nokusika ngakumbi kwaye shiya iRedmi phakathi naphakathi kunye noluhlu olusezantsi.
Ke kuyakufuneka sibone ukuba sinemodeli entsha yeXiaomi kuluhlu lweMi Max neMi Qaphela kunyaka olandelayo. Abasebenzisi abaninzi bazisola ngesi sigqibo, kodwa ndibona ukukhula okukhulu kwekhathalogu yohlobo lwesiTshayina, yinto esinokuyiqonda ngamaxesha onke.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » UXiaomi akazukumilisela nayiphi na iMi Max okanye iMi Qaphela kulo nyaka
IKirin 810 igqwesa iSpapdragon 730 kunye neKirin 710 kuzo zonke iimvavanyo ze-AnTuTu
Molo uHero Zonke iiNkanyezi kubalandeli bokungasebenzi kunye nokuzenzekelayo